‘पहिला मलामी पनि निकै आउथे, हिजोआज मृतक कोरोनाले नै मरेका हुन् कि भन्ने डरले पनि मलामी आउन डराएका हुन्’
कोरोनाको संत्राशपछि सरकारले गरेको ‘लकडाउन’ पछि पशुपतिनाथ, पारिपट्टिको सन्ध्या आरती मात्र हैन, पशुपतिनाथ परिसरको समसानघाट पनि सुनसान छ । कतै मृतकलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको त हैन भन्ने आशंकाले पनि आफन्तजन मलामी जान छाडेका छन् ।
नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ– जन्ती डाकेपछि मात्र जानू, मलामी चाहिँ सुनेपछि जानू ! आफन्तलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिन पछिल्लो समयमा महिलासमेत घाट जाने गर्थे । सयौँ मलामी देखिने आर्यघाटमा मलामी घटेर बिहीबार जम्मा ९ जना मात्रै भेटिए ।
लामो समयदेखि आर्यघाटनजिकै चियापसल गरेर बसेका बिराटनगर स्थायी घर भई काठमाडौं, बत्तीसपुतली बस्दै आएका ५८ वर्षीय अमर खरेलले भने, ‘कोरोनाको डरले मान्छे मलामी आउन छोडिसके ! घरबाट बाहिर ननिस्कनू भन्ने सरकारको निर्देशन छ । त्यसैले पनि मलामी नआएका हुन् कि !’
‘पहिला मलामी पनि निकै आउथे, हिजोआज मृतक कोरोनाले नै मरेका हुन् कि भन्ने डरले पनि मलामी आउन डराएका हुन्’, खरेलले भने ।
हुन त आर्यघाट उसै सुनसान छ । मलामी आउनेमा पनि मृतकको परिवारबाहिरका मान्छे आउन छाडे । ‘पहिला–पहिला निकै मलामी आउँथे, कोरोनाको हल्ला चलेपछि नै मलामी ह्वात्तै घटेका थिए’, खरेलले भने, ‘आर्यघाटमा अचेल निकै थोरै संख्यामा देखिन्छन् मलामी ! सदे मान्छे मर्दा पनि कोरोना बिरामी नै हो कि भन्ने भ्रम समाजमा फैलिसकेको छ । त्यसैले त्यति साह्रो मलामी नदेखिएका हुन् ।’
प्रकाशित मिति: Mar 26, 2020 15:19:25